Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAparna
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uAparna iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Isanda kongezwa ngenxa yeMFUNO EPHAKAMILEYO! INDAWO! Tulsi Marg, Sec19A Noida. Isitudiyo esinefanitshala(pvt en-suite kitchenette, bath)2ndfloor. Isicakazana semihla ngemihla esincomekayo, inkonzo yokutshayela. UkuPaka kwaMahala, uKhuseleko. Ukufikelela ngokuzimeleyo (izitepsi zepvt). Izibini ezinobuhlobo. Ukuhlamba iimpahla srvc ngentlawulo. Sec18 Metro650m, Sect18 Mkt400m, DLFMall750m, New Delhi RlwyStatn17kms, IGIntrntnl Airport27.7kms. Ulwakhiwo olutsha kunye nezixhobo zombane. I-WiFi, i-back-up yamandla, i-AC, ifriji, amanzi ashushu, ibhedi yenkosi. I-balcony, i-patio, i-roof terrace. AKUTSHAYWA
Qaphela: Ngokusekelwe kwimfuno ephezulu kakhulu yezitudiyo zethu, songeze enye indlu yestudiyo kuluhlu lwethu luka-Airbnb! Isakhiwo esifanayo kunye nomgangatho ofanayo nezinye izindlu zethu ezi-3.
Wamkelekile kuYash Lok -- ikhaya lakho kude nekhaya! Ndingumamkeli wakho uAparna. Ndibamba amagumbi amaninzi estudio eYash Lok kunye nomama wam u-Usha Rani.
Olu dweliso lolwe-Apt 2 -- indawo 'yestudiyo' ezimeleyo enemfihlo epheleleyo, kunye nomnyango ozimeleyo kumgangatho we-2 weYash Lok. Kwabangaqhelanga, nge 'studio' apt sithetha igumbi elikhulu elinebhedi elingana nenkosi kwelinye icala, ikhitshi elincinci labucala kwelinye kunye nebhafu yabucala encanyathiselweyo. Le AYIYO-1BHK kuba akukho holo, kwaye ikhitshi likwicala elinye legumbi. Eli ligumbi (kwaye ayilogumbi labucala) kuba liziko elizimeleyo elinesango elizimeleyo kwaye aliyonxalenye yenye indlu. Ineminyango emi-2 yangaphandle-i-1 ikhokelela kwibalcony kunye nenye ukuya kwi-aangan/ipatio evulekileyo. Zombini i-aangan kunye nebalcony zibonelela ngokufikelela kwinqanaba elizimeleyo (ilitye kunye nekholamu) (akukho nyusi) ekhokelela kwi-driveway kunye nesakhiwo sangaphandle; iindwendwe akufuneki zingene kumgangatho wokuqala okanye amagumbi asezantsi xa zingena kwaye ziphuma kwisakhiwo. I-aangan nayo ineleli yentsimbi ekhokelela kwithafa eluphahleni.
Isakhiwo (Yash Lok) Isishwankathelo kunye noBumelwane:
Isakhiwo sihlala kwikona eninzi, sizaliswe kukukhanya kwendalo kunye nomoya obalaseleyo. Kukho indawo yokupaka yasimahla, ekhuselekileyo kwindawo-zombini kwindlela yokuqhuba nangaphandle kwesakhiwo. Oonogada becandelo le-19, ibhloko A banekhiyoski yabo ngaphandle kwesakhiwo kwaye bayenze 24X7. Isikhululo semetro sikumgama oziimitha ezingama-650. Sikwahlala sinooritsho beemoto, ooritsho beebhayisikile kunye neekhebhu ezipakwe ngaphandle kwesakhiwo.
UYash Lok unamanqanaba ama-3. Umgangatho we-2 uzinikele ngokupheleleyo kwiindwendwe kwaye unamagumbi ama-4 azimeleyo e-studio kwiikona ezi-4 ze-'angan'/patio evulekileyo; indlu nganye inomnyango wabucala, ibhafu kunye nekhitshi elincinci labucala elinezixhobo zombane. Akukho holo okanye ikhitshi eqhelekileyo.
I-Yash Lok ilele entliziyweni yecandelo elixakekileyo 18-19 indawo yaseNoida. Yonke into ukusuka kwiivenkile zegrosari kunye nabathengisi beziqhamo/imifuno ukuya kwiindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, izibhedlele, iibhanki, iithiyetha njl.njl zihamba lula (ngaphakathi koluhlu lweemitha ezingama-200 ukuya kwiikhilomitha ezi-2). Yi-110m ukusuka kwiSibhedlele saseMax, i-200m ukusuka e-Atta Market kunye nabathengisi bayo, abathengisi beziqhamo / imifuno njl. Iimitha ezingama-400 ukusuka kwindawo ephithizelayo yentengiso yeCandelo 18 kunye nodederhu lweevenkile, iindawo zokutyela, iivenkile ezithengisa ukutya, iibhanki, iithiyetha njl.njl; I-750m esuka kwi-DLF Mall yase-Indiya -- ithathwa njengenye yezona venkile zikhulu zevenkile e-Indiya kwaye isasazeke ngaphezu kwe-2 yezigidi zeskweri. ; Ibala lemidlalo livulekele wonke umntu kwaye nokungenwa kusimahla.
- Ukucoca - isicakakazi semihla ngemihla sasimahla kunye nenkonzo yokutshayela. Ngexesha lokuhlala kwakho - isicakakazi siya kutshayela igumbi, silirhole ngesibulali ntsholongwane saphantsi, sicoce izitya kunye nothuli lwendlu; umtshayela uyakucoca igumbi lokuhlambela & nesitya sangasese. Abasebenzi bethu bacoca nzulu igumbi phakathi kweendwendwe. Abasebenzi bethu bakwahlamba i-aangan, iibhalkhoni kunye nokutshayela kunye ne-mops izinyuko rhoqo. Ekubeni abasebenzi bethu betyelela indlu iiyure ezimbalwa kuphela, iiyure zokucoca zimisiwe. Asiyi kukwazi ukwamkela izicelo zokucoca indlu ngamanye amaxesha ebudeni bemini.
Ngelixa ukucoca okungentla kuluncedo, sibiza imali encinci 'yelinen'/'intlawulo yokucoca' ye-Rs 220 ngobhukisho olulixabiso lexesha elinye lokuhlamba impahla esilibizayo ngumshicileli wethu. Iwasha yethu icoca zonke iibhedi, izigqubuthelo zomqamelo, iingubo zengubo, & neetawuli phakathi kokuhlala kweendwendwe kunye nomrhumo wokucoca uya kuye ngqo. Lo mrhumo uqinisekisa ukuba siyakwazi ukuhlawula le ndleko (ingakumbi kwiindawo zokuhlala ezimfutshane kakhulu) ngaphandle kokunyusa umyinge wegumbi lokulala ebusuku.
Ukuba ungathanda ukuba sitshintshe ilinen yokulala kunye / okanye iitawuli ngexesha lokuhlala kwakho, siya kwenza njalo ngovuyo. Nangona kunjalo kuya kufuneka uhlawule iwasha yethu ngale nkonzo ngokweqhekeza ngalinye [Ishiti lebhedi - ii-Rs 50; Isigqubuthelo somqamelo - i-Rs 10 ngesiqwenga ngasinye; Ithawula - i-Rs 50 ngeqhekeza; Ikhava yokuthuthuzela - ii-Rs 50; Ibhedi ehonjisiweyo/ikhava yokulala - ii-Rs 50].
Ezinye izinto eziluncedo:
-I-AC, ifan yesilingi, i-back-up yamandla, ifriji, amanzi ashushu, isifudumezi esiphathwayo
I-Wi-Fi - i-Broadband ye-Airtel (isantya se-intanethi ukuya kwi-40Mbps, idatha engenamkhawulo); unxibelelwano ekwabelwana phakathi 2 amagumbi.
-Ibhedi elingana nenkosi enomandlalo, umatrasi womqhaphu ongaphezulu kunye nemiqamelo ethambileyo eyongezelelekileyo, iibhedi zomqhaphu ezisanda kuhlanjwa kunye nezigqubuthelo zomqamelo womqhaphu, ingubo yokuthuthuzela enesigqubuthelo somqhaphu esandula kuhlanjwa, ibhedi kunye nemiqamelo yokuhombisa.
-IWardrobe enendawo eninzi yokugcina, ii-hangers, intsimbi yeempahla, isomisi seenwele.
- Ikhitshi yabucala ene— isitshisi sokwazisa, i mixer/grinder/blender, sandwich toaster/ panini maker, pressure cooker, kadhai, ipani, ipani yokuqhotsa, iparaat (ukuxova iatta/intlama njlnjl), chakla belan set, tawa, iperi yeentlawu ( chimta), i-mortar-pestle, i-ladle/i-kadchi (ye-dal/ikhari, ukuqhotsa ngokunzulu), i-palta (uku-flip), iimela zokunqunqa, isihluzi seti, izitya zokuphakela, iipleyiti zedinala, iipleyiti zekota, izitya, amacephe/iifolokhwe/iimela, iti /imagi zekofu, iiglasi (amanzi, ikofu ebandayo, ibhiya), umgqomo wothuli, isepha yokuhlamba izitya kunye ne-scrub. Kukwaqukwe namanzi okusela, iti, i-creamer, ikofu, iswekile, ityuwa, ipepile.
-Igumbi lokuhlambela labucala elineetawuli ezisandula ukuhlanjwa, isepha yokuhlamba, ukuhlamba izandla, ishampu, isicoci. Sibonelela ngeebhidethi/izitshizi zejethi kunye nephepha langasese ngenxa yefuthe elibi lokusingqongileyo.
- Isibane, ijute rug, moodhas/ottomans.
- Impahla yokumisa i-rack
- Inkonzo yokuhlamba impahla (ukuhlamba & nentsimbi) iyafumaneka ngentlawulo ngeqhekeza ngalinye — nceda ubuze.
Akukho ndawo ilungele zonke iindwendwe. Ukwaneliseka kweendwendwe ngumsebenzi wokufaneleka. Ngaphambi kokuba ubhukishe, nceda ufunde ngezantsi ukuze wazi ukuba ulindele ntoni.
-Isithembiso sethu kunye nezinto eziphambili - Indawo esembindini, iCoca, iKhuselekileyo, iNgaphazamisi / iBucala, iNyaniso, iyafikeleleka. Ifakwe kwindawo ekhuselekileyo, embindini (umgama wokuhamba kuzo zonke izibonelelo), indawo yokuhlala; kwindlela enkulu (Tulsi Marg) entliziyweni yeNoida & kufutshane neDelhi (imigama ethile kwisilayidi kwimifanekiso). Sector 19 security guard kiosk right ngaphandle kwesakhiwo & ephethwe 24X7. Iindwendwe ezingama-97% zisinike i-5 kucoceko. I-Studio apt - iyunithi ezimeleyo enesango elizimeleyo; imfihlo epheleleyo yeendwendwe. Unxibelelwano oluthe ngqo kunye noluselubala. Kwindawo kunye nezinto eziluncedo ezibonelelweyo, amaxabiso angaphantsi kakhulu komyinge wemarike. Ukuzola, ikhaya elinoxolo, elinomoya ozolileyo kunye nokulula. Igcwele ilanga kunye nomoya wokungenisa umoya.
- Umgaqo-nkqubo wethu ‘wokungaqhubi kakuhle’ — i-AirBnbs inoluhlu olubanzi, ukusuka kuhlahlo lwabiwo-mali ukuya kubunewunewu besiphelo esiphakamileyo, kwaye ixabisa ngokufanelekileyo. Kuthi, ukuphumeza isithembiso sethu ngelixa sigcina izitudiyo zethu zifikeleleka kangangoko sinakho, yeyona nto iphambili. Sibonelela ngezinto eziluncedo eziyimfuneko (iinkcukacha ezingentla) ezifunekayo ukwenza amava okuhamba akhululeke, & siphephe naziphi na 'iifrills' eziya kusinyanzela ukuba sonyuse izinga legumbi lasebusuku (umzekelo, AKUKHO iindlela zokuzonwabisa - iTV, izinto zokudlala; AKUKHO matshini wokuvasa/izomisi, ii-microwaves. njl).
- Iireyithingi zethu zeenkwenkwezi ezi-5 - Uninzi lweendwendwe zisilinganisele ngeenkwenkwezi ezi-5; hayi ngenxa yokuba siyihotele okanye iBnB yobunewunewu okanye sigqibelele, kodwa ngenxa yokuba sisebenza nzima ukwenza ukuba iindwendwe zethu zihlale zikhululekile kangangoko kunokwenzeka. Siyaphendula kwaye sithatha impendulo eyakhayo ngokubalulekileyo. Inani elibalulekileyo leendwendwe ziyabuya kunye/okanye zandise ukuhlala kwazo. Ukulinganiswa kweenkwenkwezi ezi-5 kuthetha ukuba "Sibe namava amnandi ngakumbi ngokuqwalasela ixabiso esilihlawuleyo, kwaye siya kukuvuyela ukubuyela / ukwandisa ukuhlala kwethu".
- Ixesha lokungena / lokuphuma - Ngena phakathi kwe-1: 00 emva kwemini kunye ne-10: 00 pm; phuma ngo 11:00 am. Ngenxa yokuba sihlala sibhukishwa sibuyela emva, kwaye abasebenzi bethu bafuna ubuncinci iyure ukucoca nzulu indlu nganye phakathi kokuhlala kweendwendwe, kwaye abasebenzi bethu baneeyure ezimiselweyo zokucoca, ASINAYO IXESHA LOKUGQIBELA UKUJONGA & UKUJONGA- IXESHA LOKUPHUMA.
- Critters — INoida ihlaselwe ziingcongconi, iimpuku, amacikilishe njlnjl idabi eliqhubekayo. Ke ngalo naliphi na ixesha uza kuhlala nathi, uya kuyibona le mipu isebenza.
- Uxinzelelo lwamanzi - Uxinzelelo lwamanzi kwiishawari zangasese lungaphantsi kunolufanelekileyo. Sibonelele ngamabhakethi kunye neemagi (isicakakazi sethu sicoca ezi phakathi kokuhlala kweendwendwe).
- Umgangatho wamanzi — Umgangatho wamanzi eNoida ukwimeko embi (intsalela kumanzi ompompo). Sibonelela ngamanzi asebhotileni ngeenjongo zokusela/zokupheka kwiinkampu/iijagi.
- Iphepha lezindlu zangasese - Sine-bidet/ijethi zezandla kwizindlu zangasese zethu kwaye hayi nephepha langasese ngenxa yefuthe elibi lokusingqongileyo.
- AKUKHO UKUTSHAYA - ngaphakathi okanye ngaphandle kweflethi
- Nceda ungalahli indlu okanye iindawo eziqhelekileyo. Nceda ungaphazamisi abanye abahlali/abamelwane. Nceda uphathe wonke umntu okwipropati ngokunjalo nakwipropati ngembeko.
- Zonke iindwendwe ezihlala kwipropati kufuneka zisayine irejista yeendwendwe kwaye zabelane ngoRhulumente wazo. Isazisi (esiya kuthatha umfanekiso).
- Abemi bamazwe angaphandle kufuneka babonise ipasipoti / i-visa esebenzayo
Iimitha ezingama-400 ukusuka kwintengiso yeCandelo le-18 ephithizelayo kunye neevenkile zayo, iindawo zokutyela, iivenkile ezithengisa ukutya, iibhanki, iithiyetha njl.njl.